HORDHAC: Arsenal vs Chelsea – Dagaalka FINALKA FA Cup, Gunners Oo Haddii Ay Guuleysato Europa League Ka Qayb-geli Doonta, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey – Laacibnet.net
HORDHAC: Arsenal vs Chelsea – Dagaalka FINALKA FA Cup, Gunners Oo Haddii Ay Guuleysato Europa League Ka Qayb-geli Doonta, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey
Tartanka ugu faca weyn waddanka Ingiriiska ee FA Cup ayay finalka 139aad maanta isku haleelayaan labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea oo fiidnimada hore foodda isku dari doona garoonka qaranka ee Wembley.
Gunners waxay wareeggii semi-finalka kusoo garaacday Manchester City oo ay 2-0 kusoo dhufatay, waxaanay u dagaallamaysaa inay markii 14aad taariikhdeeda ku guuleysato koobkan oo saddex sannadood ka hor ay ugu dambaysay inay qaadaan. Laakiin Chelsea oo finalkaas ay Arsenal ka qaadday, isla markaana 2-1 ku karbaashtay ayaa waxay finalka sannadkan ku timid qaab xooggan iyagoo semi-finalkii kasoo adkaaday Manchester United.
Labadan kooxood ayaa ah kuwa ugu guulaha badan FA Cup qarnigan 21aad, waxaanay Arsenal iyo Chelsea kusoo guuleysteen 11 jeer laga soo bilaabo sannadkii 2001, taas oo ka dhigaysa labada kooxood ee koobabka ugu badan gacantooda galeen labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey.
Arsenal ayaa ahayd kooxda koobkan looga dambeeyey qarnigan, waxaanay markan isku hallaynayaan Mikel Arteta oo isaga oo ciyaartoy ah u horseeday koobkan, isla markaana u muuqda inuu soo noolaynayo qaab ciyaareedkii naadiga tan iyo intii uu kala wareegay Unai Emery bishii December.
Inkasta oo bandhiggoodu wanaagsanaa, haddana waxay Arsenal qaadatay xili ciyaareedkii ugu xumaa muddo 25 sannadood ah, waxaanay dhibaatada ugu badan ay tahay guulaha oo ku adkaaday iyo natiijooyinka liita ee ay la imanayeen.
Kooxdan ka dhisan woqooyiga London, waxay maanta heli doontaa £30 milyan oo Gini haddii ay koobka ku guuleysato, waxaanay si toos ah uga qayb-geli doontaa tartanka Europa League ee ay mar horeba ka hadheen, taas oo ah fursad uu Mikel Arteta ciyaartoygiisa ku dhiirigelinayay inay ka faa’iidaystaan.
Sababta kale ee ay Arsenal ugu qasban tahay inay koobkan halgan u gasho ayaa ah sii haysashada Pierre-Emerick Aubameyang oo la sheegayo in kusii haynta Emirates ay aad u adag tahay haddii ay kooxdu tartamada Yurub tegi weydo, isla markaana aanu heshiiskiisa sannadka kali ahi ka hadhsan yahay kordhin doonin.
Siddeed jeer oo ka mid ah sagaalkii sannadood ee ay timid finalka FA Cup, waxay Arsenal ka dhigtay koox ku suntan taariikhda koobkan.
Dhinaca kale, Chelsea oo soo garaacday Manchester United semi-finalkii, waxay Finalka FA timid sagaal jeer tan iyo sannadkii 1997kii, waxaanay koobka qaadatay toddoba jeer illaa markaas.
Labada jeer ee koobka laga qaaday na, waxa Chelsea jabka u gyesatay Arsenal, iyadoo midka hore ahaa finalkii 2002 iyo finalkii saddex sannadood ka hor oo uu Aaron Ramsey ka dhaliyey goolka guusha, xilli uu Arsene Wenger kasii socday kooxda.
Dhamaan shantii ciyaarood ee ay labada kooxoodba xili ciyaareedkan tartanka FA Cup soo dheeleen illaa ay kasoo gaadhayeen finalka, mid walba way soo guuleysatay, waana sababta keentay inay koobka iskugu yimaaddaan.
Ciyaarta: Arsenal vs Chelsea
Tartanka: Finalka FA Cup
Arsenal waxa muddo dheer ka maqnaan doona difaaca reer Germany ee Shkodran Mustafi oo qalliin lagu sameeyey, waxaana la filayaa in bisha October uu garoomada kusoo laabto.
Mustafi, waxa uu liiska ciyaartoyda dhaawac ku maqan kula biiray Gabriel Martinelli, Calum Chambers iyo Pablo Mari, laakiin goolhaye Bernd Leno oo garoomada kusoo laaabtay ayaa la sheegay in aanu boqolkiiba boqol diyaar u ahayn inuu kulankan ciyaaro.
Arteta waxa uu sii wadaa inuu cadaadiyo Mestu Ozil iyo Matteo Guendouzi oo uu liiska kooxdiisa ka reebayay qaybtii dambe ee xili ciyaareedka, lamana filayo inuu fursad ka siin doono kulankan, waxaanay jamaahiirtu rajaynayaan in shaxdii uu kula ciyaaray Man City ee 3-4-3 uu Chelsea kala hor tegi doono, iyadoo Kierran Tierney iyo Bukayo Saka ay difaaca bidix ku loollamayaan.
Dhinaca Chelsea, waxa kaliya oo dhaawac uga maqan Billy Gilmour oo aan ciyaartan rajo ka qabin inuu imanayo, laakiin waxa kale oo uu shaki ku jiraa N’Golo Kante oo lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee kooxdiisa dhaawac u jiifay iyo Willian oo ciyaartii Wolves ka maqnaa.
Frank Lampard waxa uu haystaa ciyaartooyo badan oo khadka dhexe ah oo uu kala doorto, waxaana inkasta oo N’Golo Kante uu tababarka kusoo laabtay, haddana la filayaa inay kusoo bilaaban doonaan Jorginho, Mateo Kovacic iyo Mason Mount.
ninka wxaan soqoray umaxumid arsenal fan wepsiteka haiskahaleyn kudhilahaa sababtoo ah the opponent team fahfahin dherad ah kamadan bixin
Website Kaan Chelsea Waaba Laga Neceb Yahay, Guulaha Chelsea Raqiis Ayu Ka Dhigaa, Suuqa Chelsea Raqiis Ayu Ka Dhiga, Taarikhda Raqiis Ayu Ka Dhiga, Webka Ganacsi Ayad U Furatay Ee Garba Siman Ka Dhig Kooxaha Koox Walba Libinteeda Sii, Aniga Maxamed Qadar Ayaan Aaday Wixii Chelsea Ah Na Keena Meeshaan Manchester United Iyo Arsenal Ayaa Iska Leh Nabadey.
Meeshaan dadka Sooqoro taageerayaal miyaa mise damiiniin magudbayaal ah😂 tan Kle shaxda chelsea sida Loo qalday iigu daran kkkk 3-4-3 Uu kusoo galaa Lampard iga qora Sidoo Kle Zouma Uu fiirisiyay xariifkaan line up inu yahay Haloo sheego macsalaama
Horto ma taageero arsenal baa tahay mise falanqeeye ciyaaraha ag